Sula i-Nano-Emulsions nge-Stuph ne-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-nano-emulsions acacile anezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezicelo ekudleni, isiphuzo nakwindlela yokwenza izimonyo. Ukuhlinzekwa kwe-Stuph Corp kuyinto ehlukahlukene yokudla ebangeni, ama-emulsifiers aphezulu kakhulu ukulungiselela ama-nano-emulsions acacile wokusetshenziswa ekudleni, iziphuzo, ama-tinctures, ukugxila kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba. I-Ultrasonic homogenisation ye-oyela / ingxube yamanzi ne-Stuph emulsifiers isiza ukulungiselela ukucwaswa okusobala-grade nano-emulsions ngemizuzwana.
I-Stuph Nano-Emulsions yeziphuzo, izingqungquthela neziphuzo
IStuph emulsifier 4514 iyi-emulsifier enezici ezimbili eziyinkimbinkimbi, okwenza kube lula ukukhiqiza ama-nano-emulsions acacile. Layisha i-nano-emulsion yakho ngama-bioactive complements afana ne-cannabidiol (CBD), tetrahydrocannabinol (THC), cannabigerol (CBG), amavithamini, ama-antioxidants, ama-polyphenols, i-curcumin, i-resveratrol, i-CoQ10, i-quercitin noma ezinye izinto ezinempilo. Lapho kufakwa emulsion e-nano-sized-in-water, i-hydrophobic (= edonsela amanzi) iba ngamanzi ancibilikayo futhi ingadluliselwa emgudwini wegazi osuselwa emanzini ungene kumaseli womzimba womuntu, lapho lezo zinto ezinamandla zingafaka imithamo yazo imiphumela ekhuthaza impilo. Uma kungenakwenziwa ohlelweni lokulethwa kwe-nano, i-bioavailability kanye nokufakwa kwezinye izinto ze-biioactive imbi kakhulu. Ngokwesibonelo, lapho CBD iqondiswa ngomlomo ngaphandle nano-isithuthukisi, ngu kuphela. I-6% ye-CBD iyabanjwa, kanti iningi lithululiwe ngaphandle kokudalwa.
Izithako ze-bioactive ezithuthukisiwe ze-Nano zivumela umthamo ophansi, ngoba isilinganiso sokufakwa kanye nokwanda komzimba sanda kakhulu. Izithasiselo ezisetshenziswe yi-Nano-emulsified, ukudla kanye nemikhiqizo yezempilo kusebenza kahle kakhulu futhi njengoba izithako ezingasebenzi kakhulu zingasebenzi, ukukhiqizwa kuyinto esebenza ngempumelelo futhi nekhwalithi ephezulu iba nomnotho ngokwengeziwe.
Funda kabanzi nge-Stuph emulsifier 4514 yeziphuzo, ukugxila, ama-sodas nezinye iziphuzo!
IStuph – Uphakeme ukudla ebangeni nano-emulsifiers
IStuph Nano-Emulsions yama-Edibles
Kunesidingo esandayo kusuka kumakhasimende ama-edibles aqukethe okunempilo njengezinkwa, amakhekhe, ama-muffin, amaswidi, ama-confectionaries, ushokoledi, amaswidi, ama-gummies neminye imikhiqizo yokudla. Ukucebisa ngemikhiqizo yokudla ngempumelelo ngezinto ezikhuthaza impilo ezinjenge-cannabinoids (isib. I-CBD, i-CBD, i-THC, i-terpenes njll), amavithamini, ama-antioxidants, ama-polyphenols namanye amakhemikhali e-phyto, lezo zithako ezisebenzayo kumele zenziwe ngama-bioava. Izithwali ze-Nano-ezifana ne-nano-emulsions ziyindlela evumayo yokuhlanganisa amakhompiyutha e-bioactive ebenza bawenze bancibilike amanzi futhi bandise i-bioavailability yabo.
Funda kabanzi nge-Stuph emulsifier 4514 yama-edibles, amaswidi kanye nama-gummies!
Izinzuzo ze-Stuph Emulsifiers zeNano-Emulsions
Ukunambitheka okuhle, akunambitheki
Akukho ukuphazamiseka ukunambitheka, iphunga, ukuthungwa
Kulula futhi kuphephile ukusebenzisa
Funda kabanzi mayelana ne-emulsifires yaseStuph ukuthola ukwakheka okucacile, okungamanzi kwe-nano-CBD!
Stuph Nano-emulsions ngoba Skin Care kanye Izimonyo
I-Stuph nano-emulsifier 1515 iyinkimbinkimbi enamandla emulsifying, elungele ukwakha okhilimu, isikhumba ebusweni, amathambo omzimba, ama-balms we-massage, ama-moisturizer atholakele kanye nama-concealer, ama-seramu, ama-balms we-lip kanye nama-glosses neminye imikhiqizo yezimonyo. Ama-emulsifiers aseStuph akha i-nano-size, i-emulsion ende, emanzini, ehlala isikhathi eside, engalayishwa ngezithako ezisebenzayo ezinjenge-lipids, amavithamini, ama-antioxidants, ama-polyphenols nezinye izinto ezizuzisayo. Nge-Stuph emulsifier 1515 kuba lula ukwakha ukunakekelwa kwesikhumba okunamandla kakhulu nemikhiqizo yezimonyo. Ukwenziwa okwenziwe ngcono kwe-nano kusiza ukuthuthwa kwezithako ezisebenzayo kumaseli, lapho zingakwazi ukufaka khona ukubonakala kwazo okugcwele kwemiphumela emihle.
Funda kabanzi nge-Stuph emulsifier 1515 yokunakekelwa kwesikhumba, izimonyo nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu!
Funda kabanzi mayelana Stuph emulsifiers!
IStuph 4514 yeziphuzo
IStuph 2525 yemikhiqizo yokudla
IStuph 1515 yezokhilimu & ama-lotions
UP400St – Idivaysi ye-LG ye-nano-emulsions
I-Ultrasonic Emulsification Igqamisa i-Stuph Emulsifiers
I-homogenisation ye-Ultrasonic ithuthukisa ukuxubeka kwama-emulsifiers aseStuph ngezingxube zamafutha / zamanzi ukwakha i-nano-emulsions ezinzile nezicacile. emulsification ultrasonic usuke ethuthukisa encapsulation of ezisebenzayo ezifana CBD, iTHC, amavithamini, polyphenol, Antioxidants kanye nezinye izinto zezempilo-ukugqugquzela emafutheni-e-amanzi emulsions. Labo nano-sithuthukiswe imikhiqizo yokugcina abe potency siphezulu futhi sivumela izilinganiso engezansi izithako ezisebenzayo, kusukela izinto asebenzayo zilethwa ngesilinganiso okusezingeni eliphezulu ku amaseli. Izinga eliphakeme lokusebenziseka kwemisipha lisho amandla amaningi aphezulu bese ngaleyo ndlela umthamo ophansi wezithako ezisebenzayo.
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor angamahhashi omsebenzi athembekile ekukhiqizeni: Ukuqina kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher ka-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwa kakhulu. Ukubhalwa kwedatha okuzenzakalelayo ekhadini le-SD eyakhelwe ngaphakathi kuvumela ukumiswa komkhiqizo kanye nekhwalithi ephezulu ngokuqhubekayo. Yenza ukwakheka kwakho kube okujwayelekile ngokwakha iresiphi emile kanye ne-sonication protocol usebenzisa ama-Hielscher ultrasonicators. Lokhu kukuvumela ukuthi ufeze i-Process Standadization kanye Nezenzo Zokukhiqiza Ezihle (GMP).
Ama-Emulsions ne-Emulsion-based Delivery Systems
Izinhlelo zokulethwa ezenzelwe i-Emulsion kanye nezinhlelo ze-nano-emulsion zisetshenziswa kabanzi kwizimboni zezimonyo, i-pharma, ukudla nokuphuza imboni. Ama-Emulsions ayi-colloidal dispersions aqukethe iziphuzo ezimbili ezingenakuqhathaniswa lapho isigaba esisodwa (isigaba esihlakazekile) sihlakazeka njengamaconsi amancane siye kwesinye isigaba (isigaba esiqhubekayo) lapho kukhona i-survivant (i-ejenti emulsifying).
Ngenkathi i-emulsion engazinzanga (ngaphandle kokusebenza ngokweqile) izophuka futhi ihlukanise ngezigaba zayo zokuqala ngokuhamba kwesikhathi, ukusetshenziswa kwe-emulsifiers kanye namabutho amakhulu e-shear (isb. Sonication) avumela ukulungiselela i-emulsions ezinzile.
Izinhlobo ze-Emulsion: I-Emulsion ingahlukaniswa ngama-oyela-emanzini (o / w) ne-water-in-oyile (w / o) kanye nama-emulsions aphikisayo (o / w / o noma w / o / w) emulsions.
Izinhlobo ze-Emulsion: Emulsions zibuye umahluko yisayizi droplet. Ngokuya kububanzi be-droplet ububanzi, ama-emulsion abizwa ngokuthi ama-macro-, nano, nama-micro-emulsions.
Ama-Macroemusions anamaconsi amakhulu impela anobubanzi abaphakathi kuka-200nm. Ukubukeka kwawo kuwubudlabudlabha noma umiyane.
Ama-Nanoemulsions anesilinganiso sokudonswa kwesilinganiso esingu-20-200 nm. Ama-Nanoemulsions acacile noma agqamile.
Ama-Microemulsions akhombisa ama-diameter amancane kakhulu we-droplet ka-5-100 nm, abanika ukubukeka okucacile. Zizinze ngokuqinile ngokuqina kwengxabano yazo yokuhlangana phakathi kwezigaba zamanzi nezamafutha.
Ama-Emulsions Wokudla Kwebanga
Ama-emulsions ebanga lokudla adinga ukuthi zonke izingxenye ze-nanoemulsions (isigaba samanzi, uwoyela ne-emulsifier, i-co-survivant) ziphephe ngokusetshenziswa ngabantu noma '' ngokuvamile zivunywa njengokuphephile '' (GRAS). Ama-nano-emulsions ebanga lokudla athola ukuheha okuningi futhi asungulwa kabanzi kusukela avumela ukufakwa kanye nokulethwa kwezithako ezisebenzayo, izinto eziphilayo nezakhi zomzimba.
Ku-nanoemulsion eboshwe izithako ezisebenzayo ibe nokuqina okuthuthukile okuvimbela ukubumbana kanye nokuhlukaniswa kwamaconsi. Enye inzuzo ebaluleke kakhulu ye-nano-emulsions izinga eliphakeme le-bioavailability kanye nethuba lokufakwa. Amaconsi asayizi nano akhombisa ukuthuthuka okuthuthukile nokuqina kwezakhiwo, zinikeza ukusebenza okuthuthukile komlomo we-bioavailability kanye nokusebenza kahle kwezinto eziphilayo ezivalekile.